The National Association for iko (RFSL) | Flammor - profetisk tidskrift
The National Association for iko (RFSL)
E nwere bụghị ọtụtụ na Swedish ụka anabata ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị correctness. Photo: ihuenyo kpofuru Day, 7 July.
Anyị nwere nnwere onwe ikwu okwu na Sweden, ma ọ pụrụ ịdị na-echebara eji ya ma ọ bụrụ na ọ na-agba counter na ndọrọ ndọrọ ọchịchị correctness. The na-eri ike adịkwa ha ọrụ.
Nke a na-adịghị nnọọ na-ekwu na aka n'obi eziokwu na correctness nke tie ya achịkwa anyị ogbenye motherland. Ọ dịghị, ọ bụ eziokwu na n'aka na a chi ojiji mba, nke a bụ onye nchụàjà Jan-Åke Karlsson na Bohuslän a bi atụ.
Ọ chọrọ iji ya okwu na-alụ ọgụ maka nri, nke bụ iwu, ya bụ na ndị nchụàjà nwere ikike na-ajụ-edo ahụ-nwoke di na nwunye. Anyị maara ugbu a na nke a nri ga-achọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-esi pụọ, anyị Prime Minister kwuo ya mgbe ọ sịrị: "Ọ dịghị onye nchụàjà Swedish Church na-ajụ ịlụ ahụ-nwoke di na nwunye."
Ugbu a bụ oge na-agba ọsọ na ụmụ nwoke na Swedish Church a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbaàmà na-agbalị iji hụ na ha ugbu a ga-achụpụ a dum uche na-adịghị na uche na President. Dị ka a ụzọ ka ọnụ mechie ndị nkatọ a na-mmetụta. Ahụ ihe na ịgbawa ala, o nwere ike ịbụ ngwá ọrụ na-eme ya.
Ugbu a, ha hụrụ otu onye nchụàjà Charles akwụkwọ ozi mgbe o nyere ndị na-esonụ nkọwa RFSL "National Association for mmekọahụ rụrụ arụ."
More ike iguzo na-Nnọchianya ugwu Bohuslän, kụziri site na Bishop Eckerdal na Gothenburg diocese. N'ihi: onye nchụàjà Karlsson ga-ahapụ ya ozi. N'ihi na nke a ị ga-esi Swedish Church na-akwụ 640.000 kronor na måndalsöner Karlsson.
Swedish Ụka o doro anya na ego na-akwụ ụgwọ nke a n'ihi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị correctness, o doro anya na nwere a elu uru. Otú ọ dị, ọ na-echegbu onwe na otu onye pụrụ imeli ike ẹkeyakde si nsọ nsọ, Kraịst na Jesus eche Nanị nchụàjà.
Nchu-àjà nke caliber Karlsson, n'ebe na-adịghị ọtụtụ ndị Swedish ụka, ọ ga-abụ nsogbu na i nwere ike imeli igbu ndị dị otú ahụ na-ejere Jehova.
Ego yiri chọọchị nwere ọtụtụ, ma ndị na-eguzosi ike na Okwu Bible n'ihi na, ha na-akwụ tufuo. Ndị ụkọchukwu na Jerusalem-akwụ ụgwọ Judas tufuo Jesus. Anyị nwere ugbu a dị otú ahụ a ụkọchukwu ndị na-eso nzọụkwụ ha?
Anyị kwesịrị ichebe ndị a na Akwụkwọ Nsọ-nchu-àjà, bụ ndị ka na Swedish chọọchị, ma kama ha na-eji kpọrọ nzukọ RFSL, ha wee ghara wakporo ma kpughere dị ka onye nchụàjà Karlsson mere.
Na nke ọ bụla, ọ bụ ihe apt nkọwa ahụ onye nchụàjà ahụ mere site RFSL. The eme ndidi kwesịrị a designation, "National Association for mmekọahụ rụrụ arụ."
Gụọ nakwa isiokwu a si 2016:
Na kọwaara anyị RFSL to: National Association for inwe mmekọahụ aghara aghara.